बन्दुक जनताले नलिई हुँदै हुँदैन : सुदर्शन, स्थायी कमिटी सदस्य, ने.क.पा. – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ माघ ८, मंगलवार) ०८:१७
सरकारसंग वार्ताको परिस्थिति कतिबेला बन्छ ? होला त वार्ता ?
यो अवस्थामा वार्ता हुँदैन । हाम्रो वार्ता गर्ने परिस्थिति छैन । वार्ता जतिबेला हुन्छ, त्यतिबेला हामी एउटा सन्तुलनमा आएका हुन्छौँ ।
(२०७५ माघ ८, मंगलवार) ०८:१७ मा प्रकाशित